I-FXGoodWay EA Review - I-EA Forex Ehamba phambili | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaFXGoodWay EAFXGoodWay EA Review
BEST Forex EA'S | UCHWEPHESHE abeluleki | FX amarobhothi FXGoodWay EA 1
FXGoodWay EA iyinhlangano enamandla futhi ephelele FX Expert Advisor oklanyelwe ukwandisa amaholo akho. Ngenye ye-Forex EA Forex eyinkimbinkimbi futhi eqinile emakethe namuhla. Ithimba labanjiniyela lihlale liqapha ukusebenza kwalolu hlelo lokuhweba ukuqinisekisa ukuthi lulungiselwe wena.
Isebenza ngebhangqa le-EURUSD kufreyimu yesikhathi SANYE NOMA YIPHI i-FX brokerge
Isebenzisa ama-algorithm akhethekile wokuvula nokuvala amasheya ngenzuzo ephathekayo
Kulula ukufaka isofthiwe ye-MT4 yokuhweba nge-interface enembile
Lokhu kusho ukuthi awutholi kuphela uhlelo oluhle namhlanje, kodwa uhlelo oluhle kakhulu luya phambili futhi. Izibuyekezo ezintsha zihanjiswa kuwe ngokushesha nje lapho sezilungele. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi i I-FX Good Way EA iyaqhubeka banikhaphele the best imiphumela isikhathi emva kwesikhathi emva kwesikhathi.
The Forex Expert Advisor ngoba i-platform Metatrader 4 yokuhweba ingasebenza EURUSD lwemali pair.
I-FX Good Way EA yasungulwa ngo-i team uchwepheshe abadayisi professional abafuna ukukubona uphumelele!
I-FXGoodWay EA - Ayingazijwayele Ukuhweba Nge-Forex?
Yenza ukusetshenziswa kwe FXGoodWay EA bese ziphenduka utshalomali yakho ibe GOLD!
I-FXGoodWay EA - Ayiphundulanga Mayelana Nezimboni Zama Trading FX Ngaphambi?
imali Easy singenzi lutho okutjhiwo I-FX Good Way EA imayelana. Kuyinto ezenzakalelayo Forex Isu futhi zahlelwa uhlelo kohlaziyo evumela ukuthi wena ukuba ahlale emuva, phumula futhi umane nje ubukele i-Robot FX Trading ukwenza iqhinga yayo. Ngemva nemingcele, tilinganiso netinchazelo ubufushane uzikhokhela okuye kwalungiselelwa ngawe, Robot uyangenelela asingatha yonke ukuthengiselana ngawe. Lokhu kuvumela ukuba ukulawula ebe egxile amandla akho ezinye izinto ezibalulekile kanye.
The FXGoodWay EA uhlala kanye 24 tekusebenta / 5 ekufuneni amathuba exchange enenzuzo futhi kugadla i nini lwenzuzo kungalindeleka. Ngakho ngaphandle kokuthi uyivale, ngeke miss a elichumayo lokuthengisa yohwebo option single.
Ngokungafani thina bantu, lo I-FX Good Way EA akububonisi ukungazinzi ngokomzwelo futhi izosebenza kuphela endaweni calculative ngokuphelele. Umeluleki Isazi ngeke enze sangaleso-of-the-mzuzu isinqumo; empeleni uya ukuhlanganisa amaqiniso nezibalo futhi ungavumeli ukwesaba, uvalo oba nokucindezeleka lukuvimbele.
FXGoodWay EA - Mayelana Nokuhweba Logic, Ukusetha Nezinye Izidingo
I-FX Good Way EA imidanti yohwebo e amahora ezithile, ihlaziya futhi inquma isiqondiso intengo for the next umbhangqwana amahora noma izinsuku. Futhi lokhu Umeluleki Isazi ikuvumela ukuba ukudayisa izingozi kumele bucaciswe, nenzuzo ezifiselekayo. Uhlelo Ukuhweba uzuza inzuzo enkulu futhi ivula abathengisa nsuku zonke.
Lokhu kuhweba kwe-Forex EA kuqhubeke EURUSD pair currency. Idiphozi encane edingekayo ekuhwebeni usebenzisa inkatho ye-0.01 yi-$ 700 (i-100% engozini). Kufanele usebenzise le nzuzo ukuze wenze ngokwezifiso ubukhulu bezlot, uma kudingeka. Kodwa sincoma ukusebenzisa ukulinganisa okuzenzakalelayo kwenkatho, kanye nokuhweba ngengozi enkulu 35%. Ukuze ukwazi ukudayisa ngaleyo ngozi, i-deposit yakho kufanele ibe yi-$ 2000 noma ngaphezulu.
FXGoodWay EA ihambisana nhlobo nanoma yiluphi uhlobo lwe-FX broker kanye ne-akhawunti uma nje umthengisi evumela ukuhweba kwe-Expert Advisor. Abanye abadayisi esivame ukuwasebenzisa I-FXOpen, iThikimill, iMakethe ye-IC noma i-Forex4you.
I-FXGoodWay EA - Mayelana ne-New New FXGoodWay X2
Ekuthuthukisweni kwalokhu I-FxGoodWay EA, Abadali banqume ukungaguquki okusebenzayo futhi kusebenza ngempumelelo isikhathi eside, kodwa mane bangeze ezinye izici.
I-FXGoodWay X2 inikeza amasethingi amabili ezilungiselelo ezihlukile, ezibandakanya amaphethini amaningi (amaseshini). Esigabeni sezilungiselelo ze-EA kuyenzeka ukhethe ukuthi ungadayisa usebenzisa i-Set 1, Setha i-2, noma womabili amasethi ngasikhathi sinye.
Setha i-1 ngokuyisisekelo inguqulo yakudala ye FXGoodWay EA. Isebenzisa kuze kufinyelele kumaphethini we-10
Setha i-2 liqukethe izilungiselelo ezintsha ezibuye zahlolwa isikhathi eside ku-akhawunti yangempela, imiphumela ongayithola esigabeni sezibalo. Isebenzisa kuze kufinyelele kumaphethini we-7
Okubaluleke kakhulu ukuthi amaphethini (amaseshini) aklanyelwe ngendlela yokuhweba ngendlela ehlukile komunye nomunye, noma ngabe usebenzisa amasethi amabili ngasikhathi sinye.
I-FX Good Way EA itholakala ngokushesha ngentengo kungakholeki, ie kuphela $ 365. Ngakho ungalindi ukuba adonse ikhophi yakho!
Vakashela iwebhusayithi ye-FXGoodWay EA esemthethweni
I-FX INDLELA EZIHLANGILEYO E-EA-FOREX UMSEBENZI WOKUSEBENZISA NGOKWENZEKA NGOKUSEBENZA KOMSEBENZI WOKUSEBENZA NGOKUSEBENZA: + 20.8% UKUBUYELA KWESIKHATHI SONKE (I-ACCOUNT TRADING ACCOUNT!) Omunye othandekayo we-Forex umthengisi, IZINDABA! I-FXGoodWay I-EA - I-Best Forex Expert Advisor Nge-Smooth Incitability Released Thola ulwazi olwengeziwe namabhonasi lapha: https://www.bestforexeas.com/fxgoodway-ea-review/ I-FXGoodWay EA ingumeluleki onamandla ogcwele futhi ogcwele we-FX Expert oklanyelwe ukwandisa umholo wakho. Ngenye ye-Forex EA Forex eyinkimbinkimbi futhi eqinile emakethe namuhla. Ithimba labanjiniyela lihlale liqapha ukusebenza kwalolu hlelo lokuhweba ukuqinisekisa ukuthi lulungiselwe wena. Le Robot ye-Forex... Funda kabanzi "